INewBrandAnalytics yethula iPulse, Real-Time Social Intelligence | Martech Zone
newBrandAnalytics (nBA) yethule Pulse, ipulatifomu esuselwa emafini esiza amakhasimende afana noMcDonald's, David Bridal, Dick's Sporting Goods kanye ne-Subway ukuthola ukubonakala kwesikhathi sangempela ezihlokweni nasezingxoxweni ezihamba phambili ezithinta umbono wabo womkhiqizo nomkhiqizo.
Pulse kuhlanganisa isoftware yokulalela komphakathi eqoqa ukuphawula ngakunye nezingxoxo, inikezela ngemininingwane ethrendayo futhi ivumele umkhiqizo ukuthi usabele ngesikhathi sangempela. I-Pulse inezici ezintathu ezicacile:
Uhlelo lokuqala lokuthola nokuxwayisa - I-Pulse ithumela ngokuzenzakalela isexwayiso sokukhomba inkinga engahle ibe khona noma izingxoxo ezinhle zenhlalo ngaphambi kokuba ziye egazini; ukuqinisekisa ukuthi waziswa ngomfutho wesihloko ngaphandle kwesidingo sokuqapha ngesandla umfula womkhiqizo wakho wokuphakelwa komphakathi.
Ukuhlaziywa kwevolumu spike - I-Pulse ithatha ukukhonjwa kwesihloko isinyathelo esisodwa ngokuqhubeka ngokukhomba izitayela nokuchaza okutholakele ukuwabelana kalula namalungu eqembu.
Ukusebenziseka kalula nokuhlanganiswa okugcwele - I-Pulse iyasebenziseka futhi ihlangana nomkhiqizo wamanje we-nBA, isuka esithombeni esibanzi senhlalo iye ekuhlaziyweni okuningiliziwe kwesipiliyoni kwamakhasimende kanye nezincomo zesu lokusebenza langaphakathi.
I-Pulse inikeza izexwayiso zesikhathi sangempela se-spike nezichasiselo ezibukhoma ngezixwayiso ezenziwe ngokwezifiso, ukulandela umkhondo wangaphakathi kwezinsuku, namakhono we-geo-tagging.
I-Pulse iyingxenye ye-software entsha yeBrandAnalytics '. Isixazululo se-nBA esibanzi sifaka phakathi i-Insight, enikeza ukuqonda kwezinga lasekhaya nokuphathwa kwedumela online; Inzuzo, egxile ekuhlakanipheni kokuncintisana komphakathi nasekuhlaziyweni kokuhlaziywa komphakathi ukushaya izimbangi zakho; Xhuma, okuyisiteji sokuzibandakanya ku-inthanethi okunamasu nokwethembekile; kanye ne-Instant, enikeza ukuqapha kwezinkinga ezibikwe ngesikhathi sangempela kwamakhasimende. I-Pulse izotholakala kumikhiqizo eqala ngoJulayi.
Kuzo zonke izimboni, amabhizinisi adinga isoftware yezobuchwepheshe ezithuthukisiwe ekwazi ukuhlinzeka ngesikhathi sangempela, ukuqonda okusebenzayo kanye nezincomo. I-Pulse inika amandla amakhasimende ethu ukuthi enze okungaphezu kokulalela okujwayelekile komphakathi ukuze anikeze isifinyezo esisheshayo senhlalo nezimpendulo ezinconyiwe, ezenzelwe umkhiqizo wazo. UKristin Muhlner, isikhulu esiphezulu se-newBrandAnalytics
Tags: Customerukutholwa kusenesikhathiNbanewbrandanalyticsizexwayiso zomphakathiubuhlakani bezenhlaloukuqapha komphakathiuhlelo lokuxwayisa umphakathiukuhlaziywa kwe-spike yevolumu